Panasonic Archives - Mobiles Khabar
३ माघ २०७३, सोमबार १५:२५ Comments Off on पानासोनिकको शक्तिशाली ट्याबलेट, पाँच मिटर माथिबाट झरे पनि केहि नहुने
काठमाडौं, ३ माघ । पानासोनिकले निकै महँगो किसिमको ट्याबलेट सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले हालै विश्व बजारमा टफप्याड एफजेड ए २ नामक (Toughpad FZ-A2) रग्ड ट्याबलेट ल्याएको हो । यो एन्ड्रोयडमा आधारित ट्याबलेटको मूल्य पनि निकै महंगो रहेको छ । यसको वाईफाई भएको मोडलको बजार मूल्य २ हजार १ सय ८९ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । यो विशेष किसिमको ट्याबलेट ...
७ असार २०७३, मंगलवार १८:५९ Comments Off on पानासोनिकका ४ नयाँ स्मार्टफोन बजारमा, २ बजेट तथा २ मिड रेन्जका स्मार्टफोन
काठमाडौं, ७ असार । नेपालका लागि पानासोनिक मोबाइल फोनको एकमात्र आधिकारिक विक्रेता एलाईड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनल प्रा. लि. ले पानासोनिकका नयाँ मोबाइलहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले पानासोनिक मार्क, पानासोनिक आर्क, पानासोनिक टि ४४ तथा पानासोनिक टि ५० स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको हो । यसमध्ये मार्क र आर्क मिडरेन्जका स्मार्टफोन हुन भने टि ४४ र टि ५० बजेट तहका स्मार्टफोन ...
१८ माघ २०७२, सोमबार १३:४९ Comments Off on पानासोनिक एलुगा स्विच बजारमा, कुनैपनि कोणबाट प्रयोग गर्न सकिने रिभर्सिबल स्मार्टफोन
काठमाडौं, १८ माघ । पानासोनिक मोबाइल फोनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता तथा वितरक एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेशनलले नयाँ स्मार्टफोन पानासोनिक इलुगा स्विच (Panasonic Eluga Switch) नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। यो फोनको मुख्य विशेषतामा यसमा रहेको ‘रिभर्सिबल स्मार्टफोन’ प्रविधि हो। यो प्रविधिको सहयोगले फोनलाई कुनै पनि कोणबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । फोन सिधा, उल्टा वा साइडबाट हेर्न र प्रयोग गर्न सकिने ...
१८ भाद्र २०७२, शुक्रबार ०६:३० Comments Off on पानासोनिकको पहिलो फोर के टेलिभिजन, मूल्य करिब १० लाख रुपै‌याँ
काठमाडौं, १८ भदौ । पानासोनिक कम्पनीले बर्लिनमा चलिरहेको आईएफए इभेन्ट-२०१५ मा आफ्नो पहिलो फोर के ओएलईडी (4K OLED) टेलिभिजन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ६५ इन्चको फोर के भिएरा सीजेड-९५० टेलिभिजनमा हलिउडका व्यवसायिक रंग संयोजनकर्ता माइक सोवासँगको सहकार्यमा कलर टोन मिलाएको छ । यो टेलिभिजनमा भएको हरेक पिक्सेलले आफ्नै लाइट तथा कलर प्रदान श्रृजना गर्ने कम्पनीले बताएको छ, ...
२७ कार्तिक २०७१, बिहीबार ०८:३१ Comments Off on आँखा झिम्क्याएपछि सेल्फी खिच्ने पानासोनिकको ‘एलुगा एस’
१९ कार्तिक २०७१, बुधबार १२:४६ Comments Off on पानासोनिकको सस्तो स्मार्टफोन ‘टी९’
काठमाडौं, १९ कात्तिक । जापानी कम्पनी पानासोनिकले निकै सस्तो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । पानासोनिकले टी सिरिजको टी ९ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको हो । यो फोनको स्क्रीन ३.५ इन्चको छ भने यो फोनमा १.३ जीएचजेड डुअल कोर प्रोसेसर राखिएको छ । यो फोनको रियर क्यामरा २ मेगापिक्सलको छ जसमा एलईडी फ्ल्याश पनि राखिएको छ । त्यसैगरी यो फोनको फ्रन्ट क्यामरा ...
७ आश्विन २०७१, मंगलवार १२:४२ Comments Off on पानासोनिक मोबाइल अब नेपाली बजारमा
काठमाडौं, ७ असोज । नेपालकोलागि कार्बन मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता एलाइड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनलले पानासोनिक मोबाइल फोन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पानासोनिकका जापानी तथा भारतीय प्रतिनिधिहरुमाझ पानासोनिकका मोबाइल सेटहरु सार्वजनिक गरेको हो। एलाइडले सार्वजिक गरेका सबै सेटहरुमा डुअल सिम लाग्छ भने नेपाली ग्राहकलाई लक्षित गरेर जिएसएम र सिडिएमए (सिम र रिम) दुवै लाग्ने सेट पनि भित्र्याएकोछ । ...